Knee Yakakwira Sokisi
Mufashoni Sport Sock
Vacheche & Vana Sock
Varume vanosarudza sei kupfeka masokisi？
Vamwe vanhu vanoti masokisi iganda rechipiri remurume. Kupfeka masokisi akakodzera pachiitiko chakakodzera isainzi. Musimboti wakakosha wekuti varume vapfeke masokisi ndeyekusimbisa mutambo wese. Muzviitiko zvakawanda, mudhebhe wakareba unofukidza yakananga kumusoro. Chete nekusaziva ...
Dzidzisa iwe kupfeka masokisi evarume
Kupfeka masokisi akakodzera pachiitiko chakakodzera isainzi. nhasi, Dzidzisa iwe kupfeka masokisi evarume 1. Ruvara rwemasokisi evarume runofanira kunge rwakarerekera uye husina mutsindo kupfuura ruvara rwemudhebhe. Ruvara rwemasokisi evarume ndiyo yakanyanya fashoni uye yakapusa nzira yekumata ...
Zvakanakira kupfeka zvipfeko zvemukati zvemitambo
Ukasapfeka zvemukati zvehunyanzvi zvemukati kana uchirovedza muviri, zvinokonzeresa kukuvadza kumazamu evakadzi shamwari. Kana vakadzi vachirovedza muviri, kupfeka zvipfeko zvemukati zvemitambo kune zvakawanda zvinobatsira, izvo zvinogona kudzivirira chipfuva kubva pakutadzisa kurovedza muviri. 1.Kutora kufema kunodzivirira sagging che ...
Masokisi akapfekwa nevatambi vehunyanzvi
Semutambo wenyika, kumhanya kuri nyore kutanga, hakudi zvekushandisa uye hakuna kuganhurirwa kunzvimbo. Inofungidzirwa kuti 9 pavanhu gumi vanorasikirwa nehuremu vanotanga nekumhanya. Asi zvinofungidzirwa kuti vashoma vanhu vanoziva nezve kumhanya masokisi kunze kwevatambi. Kukwira dombo ...
Iko kusarudzwa kukuru kwemasokisi emitambo
Paunenge uchiita mitambo yakasiyana, pfeka shangu dzemitambo dzakasiyana. Saizvozvowo, masokisi anoda kuenzaniswa. Kupfeka masokisi emitambo akakodzera panguva yekurovedza muviri kunoderedzawo kukuvara kwemitambo. Izvi zvinotevera zvinonyanya kuunza akati wandei akakurumbira masokisi emitambo: 1.1 Yoga masokisi Yoga kurovedza muviri inonyanya kudzidzira kuchinjika ...
Musiyano uripo pakati pemitambo yemukati uye yemukati yemukati
Kubva pakuona kwekuumbwa kwejira: zvipfeko zvemukati zvakajairika kazhinji donje, fiber yerineni, nezvimwewo, uye nezvimwe zvichave netambo, iyo inonyanya kugadzikana uye yakanaka. Iyo micheka yemitambo yemukati inowanzo yakazara nylon, polyester-spandex, polyester nylon, nezvimwe. Mucheka une yakanaka ...
Musiyano uripo pakati pemasokisi emitambo nemasokisi akajairwa
Zvandakagovana newe nhasi mutsauko pakati pemasokisi emitambo nemasokisi akajairwa. Kana Ubuy achitaura nezvenyaya yanhasi, ndinotenda vanhu vazhinji vachange vasina chokwadi. Masokisi acho anowanzo pfeka zvakanaka, nei ndichifanira kusarudza masokisi emitambo kana ndichirovedza muviri? Iwo ese masokisi? Ndeupi musiyano? ...
Mamwe mazano kune varume kuti vasarudze masokisi evarume
Vamwe vanhu vanoti masokisi iganda repiri remurume. Kupfeka masokisi akakodzera pachiitiko chakakodzera isainzi. Musimboti wakakosha wekuti varume vapfeke masokisi ndeyekusimbisa mutambo wese. Muzviitiko zvakawanda, mudhebhe wakareba unofukidza yakananga kumusoro. Chete nekusaziva ca ...
Autumn iri kuuya！ Nzira yekusarudza yemhando yepamusoro masokisi
Autumn iri kuswedera, uye inguva yemasokisi. Vakadzi vanoda runako vanosarudza sei mhando yepamusoro yemastocker? Ubuy anokuudza kuti zviri nyore kugona zvinhu zvitatu uye sarudza maviri emafashoni uye emhando yepamusoro masokisi! 1. Tarisa hunhu hwekuonekwa kwesokisi Iyo firs ...
Kuongororwa kwenzvimbo yekusimudzira yemusika weChina masokisi emusika mu2020
China rave rakakura nyika inogadzira masokisi nekutengesa kunze kwenyika kweanopfuura mabhiriyoni gumi nematanhatu mapaundi Sokisi rekugadzira masokisi rakatangira muEurope neAmerica, kungofanana nemamwe maindasitiri. Nekudzika kwekudyidzana kwepasi rose kwehupfumi, maitiro ekuparadzaniswa kwenyika dzevashandi mu ...
Maitiro ekusarudza zvemukati zvipfeko zvemukati？
ne admin pane 20-06-08
1. Sarudza jira rakakodzera Zvipfeko zvemukati zvemitambo zvinogona kunge zviri nyore, zviri nyore kuwacha, kupfeka zvisingagone, uye isina ziya, isina polyester fiber uye machira enylon anokurudzirwa. Vanogona kuzadzikisa zvirevo zviri pamusoro uye voita kuti uve wakasununguka paunenge uchiekisesaiza 2. Sarudza chimiro maererano nekapu Mujeni ...
Wakambonzwa nezve Anofara Masokisi? Gore rakapera rakatengesa masokisi e100 mamirioni euros
ne admin pane 20-04-16
Pamwe vamwe vanhu havazive neHappy Sokisi. Iyo mhando yakavambwa muSweden muna2008, zvachose kunze kwesviro pfungwa kubva kuna Mikael Söderlindh naViktor Tell. Vakaona kuti mamwe emasokisi akajeka uye akadhindwa pamusika (mazhinji acho akadhindwa nemusoro waSimpson) vangangoita ...
KuUbuy unowana kwete kwete chete masokisi uye zvisina musono zvemukati zvauri kutsvaga, asi zvakare ane hushamwari bhizinesi mudiwa, uyo wepasi rose bhizinesi anova nyore. Isu tinovimba nebasa rakanaka uye chinangwa chedu kuve nehukama hwebhizinesi hwakavimbika hwakavakirwa sevhisi yepamusoro uye nemhando yepamusoro.